Wasaaradda Qorshaynta oo Agaasintay shirkii Shanaad ee Madasha Hormarinta Puntland Qaybta Wax-Soosaarka – Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation
Shirarkii taxanaha ahaa ee Madasha Hormarinta Puntland Qabtiisa Wax-soosaarka ayaa maanta oo taariikhdu tahay 25 ta bisha shanaad lugu qabtay Wasaaradda qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga.
Shirka oo socday muddo labo saac ah waxaa daahfuray Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kaluumaysiga Mudane: Cali Xirsi Salaad isagoo sheegay baahida loo qabay sidii loo heli lahaa madal noocaan oo kale ah, sidoo kale agaasimuhu wuxuu xusay sida ay muhiim u tahay Madasha Hormarinta Puntland.
Waxaa isna kalmadiisa jeediyaya Madaxa RCO ee Puntland Mudane: Howard Bell oo sharaxaad dheer ka bixiyay sida ay u shaqeyn doonaan hay’adaha is ku shaqada ah iyo muhiimadda ay u leeyihiin Puntland. Wuxuu sheegay mudane Bell in dhamaan ha’adaha kala duwan ee ka soo qayb galay shirka ay ku dadaalaan sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen una hormarin lahaayeen qabytooda.
Agaasiamah Guud ee wasaaradda Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane: Xuseen ayaa si qoto dheer ugu sharaxay ka soo qaybgalayaasha ujeedada laga leeyahay Madasha Hormarint Puntland qabta Wax-soosaarka waxa kale oo agaasimuhu ka jawaabay su’aalo kala duwan o ay waydiiyeen ka soo qaybgalayaashu.
Ugu danbayntii waxaa shirka soo xiray mudane Cali Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kaluumaysiga iyo Khayraadka Badda.
• Waxa la is ku raacay in Hogaanka Wax-soosaar ka noqonoyo Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo hay’adda RCO.
• Waxaa laga dooday, qaabka shaqada loo kale leeyaay lana ansixin doono kulanka xiga kan oo ka dhici doono Wasaaradda Xanaanada Xoolaha bisha soo socota 11 keeda.